Banaan bax rabshado wata oo ka dhashay dilkii Darawalkii Mooto bajaajka -
HomeWararkaBanaan bax rabshado wata oo ka dhashay dilkii Darawalkii Mooto bajaajka
Banaan bax rabshado wata oo ka dhashay dilkii Darawalkii Mooto bajaajka
Banaan bax rabshado wata ayaa ka bilowday qeybo ka mid ah Wadada Wadnaha, iyadoo ay dhigayaan dhalinyaro ka careysay dil loo geystay wiil dhalinyaro mooto bajaaj waday iyo qof la socday oo saaka lagu toogtay agagaarka Isgoyska Howlwadaag.
Dadka dibad baxaya ayaa waxay taayaro ku gubeen isgoyska Howlwadaag, waxaana dhagxaan ku tuurayeen baabuurta wadada marayay, iyadoo ciidankii halkaas joogay ay ka carareen rabshadaha.
Askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa saaka darawal waday mooto bajaaj iyo qof la socday ku toogtay agagaarka Isgoyska Howlwadaag, waxaana taasi ay keentay dibad bax rabshado watay.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa cambaareeyay dilka darawalka mooto bajaajka, waxaana uu ku amray Ciidamada ammaanka in gacanta lagu soo dhigo askarigii dilka ka dambeeyay.
Dhalinyarada mooto bajaajka ayaa todobaadyadii u dambeeyay waxay tacadiyo kala kulmayaan ciidamada dowladda, waxaana kordhay dilalka bareerka ah ee loo geysto dhalinyarada.
Todobaad ka hor ayay aheyd markii sidan oo kale wiil dhalinyaro mooto bajaaj kaxeynayay lagu dilay Buundooyinka u dhaxeeya Xamar Jajab iyo Waaberi, waxaana ay dhigeen dibad bax ay uga soo horjeedaan dilalka, waxaana markii dambe u balan-qaaday in caddaalada la horkeeni doono askariga dilka geystay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Booliska oo dhalinyarada dibad baxeysay ugu tagay goobta.